Ukujonga indawo yokusebenzela
Iimveliso kunye neMifanekiso
Iingoma zomlayishi weskid steer
Iipads zerabha ezikhethekileyo
Izinto eziluncedo ngabembi abakhasayo
Owona msebenzi uphambili we "track" kukwandisa indawo yokunxibelelana kunye nokunciphisa uxinzelelo emhlabeni, ukuze isebenze kakuhle kumhlaba othambileyo; Umsebenzi we "grouser" ikakhulu kukwandisa ukungqubana kunye nomphezulu wonxibelelwano kunye nokwenza lula imisebenzi yokunyuka. Cr yethu ...
Imeko yangoku yoomatshini bokwakha abadityanisiweyo abenza imveliso
Iimeko abasebenza kuzo abembi, oogandaganda, iikhreyithi zokurhubuluza kunye nezinye izixhobo koomatshini bokwakha zinzima, ngakumbi abakhasayo kwinkqubo yokuhamba emsebenzini kufuneka bamelane noxinzelelo olukhulu kunye nefuthe. Ukuze kuhlangatyezwane neepropathi zoomatshini abakhasayo, kufuneka ...
Imigangatho yokuhlola iimaski zonyango
1. Imaski yokhuselo yezonyango Iyahambelana nomgangatho we-GB19083-2003 "Iimfuno zobuchwephesha kwiiMaski zoKhuseleko zoNyango". Izikhombisi ezibalulekileyo zobuchwephesha zibandakanya ukungasebenzi kwe-particle ye-non-oily kunye nokuxhathisa kokuhamba komoya: (1) ukusebenza ngokuhlengahlengiswa: Phantsi kwemeko yomoya ...
BesikwiBaUMA Shanghai 2018
Siza kuya kwi-intermat 2018 nge-04/2018
Siza kuzimasa i-Intermat 2018 Ex iMiboniso yaMazwe ngaMazwe yoKwakha neziSeko） ngo-04/2018, samkelekile ukusityelela！ Booth No. NumHall a D 071 Umhla: 2018.04.23-04.28
Ukulandela umkhondo kwezixhobo zeNdalo esingqongileyo